Sidee Buu Internet-ku Ubadalayaa Dhaqaalaha Soomaalida ? | Awesome Detailed Internet Business 1 - SomaliBusiness
Waa Maxay Internet?
Intaan mowduucan ugudagalin, aan isku dayno inaan ka jawaabno su’aasha isweydiinta mudan ee ah,”Waa maxay Internetku?”. Internetku waa shabakad aad uweyn oo ah habab kombuyuutarro iskuxiran halkaaso maclumaad kala duwan la isku dhaafsado.
Soomalida ayaa baryihii danbe siyaabo kala duwan u isticmaaalaysay aaladda internetka taasoo saameyn muuqata mid dadban iyo mid toosanba ku yeelatay hormarka iyo koboca dhaqalaha dalka. Si aan macluumaad badan oga ogaano arimahaan waxaan si gaar ah isu dul istaajin donaa qodobada soo socda:
Internetku wuxuu Somalida ku xiray suuqyada caalamka; haddii aad rabto inaa soo iibsato badeeco amo alaab deegaankaada aad looga bahanyahay, waxaad ka baari kartaa Internetka macluumad ku saabsan qiimaha alaabtaas ay kajoogto suuqyada kala duwan ee caalamka. kadib waxaad oga soo gadaneysaa qiima macquul ah oo aad u jaban tayo ahana wanaagsan ee laga heli karo suuqyada aad soo indha-indheysay. Tani waxay kuu suurta galineysaa in alaabtas ay noqoto mid suuq leh lagana sameen karo macaash iyo faaido aad ubalaaran.
Habka dukaameysiga( online shopping); qofka macaamisha ah ayaa si toos usoo gadanaayo Badeecadaha iyo alaabaha kala duwan ee uu rabo isagoo joogo gurigiisa.
Macaamiilku(customer) wuxuu booqanaya boga website-ka shirkada ama wuxuu kabaari karaa qadka(search engine), si uu xirir ola sameeyo una helo adeega uu ubahan yahay. Sidookale waxaa meesha ka marneen ganacsadaha iska leh shirkada bixiso adeega online-ka ah inuu helayo macamiil badan kuwasoo kukala sugan daafaha caalamka.
Intaas waxaa sii dheer, in Internetku wax badan kusoo kordhiyay Somalida xagga tacliinta iyo aqoonta.. Qaar kamid ah ardayda Somaliyeed ayaa kabarto koorsooyin iyo duruus hab online-ah.
Tani waxey u sahleysaa ardaydaan iney helaaan qibrad iyo xirfado kala gadisan oo ay ku maareen karaan nolashooda isku filnaanshana ugaari karaan. Iskufilnaanshaha qofkasta waxey kor uqaadeysaa dhaqaalaha wadanka.
Habka shaqada online-ka ( online jobs);sara ukaca wax soo saarka warshadaha dunida hindisida aaladda tiknolojiyada casriga ayaa keentay baahida loo qabo shaqooyinka online-ka.
Dad aad ubadan ayaa kutiirsan dhaqaalo xoogana ka helo adeegan cusub. Somalida ayaa meshaan kamarneen oo kaalintooda ka qaato. Somali badan ayaa dhaqaalo ka sameeyay habkan. Dhalinyaro badan oo xirfadahooda iskala taagnaa giddarada ayey unoqotay fursad shaqo abuur.
Dhalinyaradan ayaa iska diwaan galiyo madasha( platforms) kala duwan sida Upwork , Fiverr, Freelancers.com, Clickbank, JVZOO.com, iyo kuwa kaloo badan. Meshaan ayey kahelaan Shaqooyin kala duwan. Tani waxey sababtay dhalinyaro badan oo ku tiirsanaa waalidintooda, qaraabadooda amo dad kale iney isku filnaansho gaaran dhinac walbo leh.
Shirkadaha isgaarsiinta Somalida; Adeegyada Internetka iyo qadka tooska ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta Somaalida ayaa kaalin muuqata oo lixaad leh ka qaata hormarka iyo dhaqaalaha dalka. Shirkadahan oo badankooda gaar looleyahay ayaa adeegyadooda gaarsiya
amo kubaahiya meelo badan oo dalka kamid ah. Tani waxey shaqo abuur ukeeneysaa bulshada gaar ahan dhalinyarada oo lagu tilmaamo boqolkiiba 70 dadka Somaliyeed in ay yihin dhalinyaro. Si looga faa’ideesto fursadahaan waa in la dardar galiyaa kor uqaadida aqoonta ay uleyihin shaqooyinkaan oo kale, si loo gaaro bash bash iyo barwaaqo waarta.
Marmarka qaar Internetka wuxuu kaalin weyn kageystaa gargaarka biniadanimo oo loo fidiyo dadka musiiboyionka iyo daruufaha adag soo wajahaan. Tusaale, markii ay abaaro iyo fatahaado dhacaan waxaa lagu baahiyaa internetka si caalamka logu bandhigo. Tani ayaa ka dhigeyso dowladaha hormaray iyo deeq bixiyasha caalamka in ay ugurmadaan una fidiyaan deeq adduun oo lacag iyo cuntaba iskugu jira si dadkaas nolashooda ay isku badasho. Tusaale ahaan, waxaan kawada dharagsanahay fatahaadii Wabiga Shabelle ee magaladda Beledweyne uu ku dhuftay tasoo galaafatay nolasha dad iyo duunyaba. Boqolaal qoys ayaa ka barakacay magalada kadib markii biyaha wabiga ay buux dhaafiyeen guryahooda.
Sawiro iyo muqaalo kala duwan oo naxdin leh mujinayana diifta iyo ildarnaanta ay wajahayeen dadkaas ayaa lagu bahiyay baraha bulshada. Dad badan ayaa ka dhiidhiyey arintaas; hadey noqon laheed beesha calamka , hay’adaha u olaleya arimaha biniadanimada , dowlada Federalka Somaliya iyo shacabka Somaliyeed dal iyo dibadba. Waxey dhaqaalo iyo gargaar lasoo gareen dadkii halkaas kutabaalesnaa, nolashoodana sidii caadiga eheed bey kusoo laabatay. Halkaas waxey tusaale cad nogu tahay saamenta xogan uu Internetku ku leyahay samata bixinta, hormarka iyo koboca dhaqalaha Somaliya.
Aaladaha udanbeeyey ee casriga ee uu soo kordhiyey internetka sida website-yada iyo Youtube-ka ayaa ladareemayaa saameynta xoogan ee dhaqaalaha uu ku leeyahay . Dhalinyaradan ayaa inta badan baahiya arimo muhiim u ah bulshada sida wararka, majaajilo iyo madadaalo, duruus diini iyo maadiba leh iyo waxyaalo kale muhiim u ah bulshada. Halkaan waxey kasameyaan kana helaan lacag ay ku kaafin karaan nolashooda iyo tan dadka kalaba. Tan ayaa tusaale unoqtay dhalinyaro badan oo shaqa la’aan ahaa in ay ku daydaan dhalinyaro hormar kala duwan ka sameysay aaladda Internetka tasoo yareysay meel iska istaaga badan iyo daruufaha ay ladaaladhacayeen dhalinyarada.Shaqo abuurka nocaan ah waxaa uu kamid yahay faaidoyinka uu Internetku keenay oo si lixaad leh ku socdo dunidan casriga aynu joogno.
Gabagabadii iyo gunaanadkii, waxaa indhaha laga qarsan Karin oo si cad logu wada jedaa isbadalka weyn mid toosan iyo mid dadbanba uu Internetku kuleyahay dhaqalaha Soomaaliya. Waxaa uu hormariyay kaabayaasha dhaqaalaha, adeega bulshada,caafimaadka ,tacliinta iyo nolasha dadka.
Waxaa haboon in aan uwada istaagno kafaaidesiga internetka si hufan maadama aan hormar dhaqaale an ka sameen karno.
Warbixinada Hore ka Raac Halkan : – https://blog.somalibusiness.info/dhaqaalahasomaaliyajoogta/
Copyright 2022 -Somalibusiness.info
nagu so biir!
Ka mid noqo dedka ugu horeeya OO Blog-keena arka.
Naga Mid Noqo (Join Us)
Ku So Biir (Join)